Ronald Koeman Oo Niyad-jab Kale Loo Sheegay Xilli Ay Isku Diyaarinayaan Valencia & Real Madrid - Laacib
Ronald Koeman Oo Niyad-jab Kale Loo Sheegay Xilli Ay Isku Diyaarinayaan Valencia & Real Madrid
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa war ay ka naxaan uu kasoo gaadhay qaaradda Latin America oo ay kaga maqan yihiin ciyaartooyo ka qayb-gelaya kulamada isreeb-reebka koobka adduunka.
Ronald Koeman oo ay kooxdiisu isku diyaaarinayso kulamada adag ee Valencia iyo Real Madrid oo ah labada ciyaarood ee ugu soo horreeya marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah ayaa waxa loo sheegay inuu dhaawac soo gaadhay difaaca dhexe ee Ronald Araujo.
Laacibkan ayaa uu dhaawac kasoo gaadhay ciyaaartii Uruguay iyo Argentina, waxaana uu dib ugu soo laabanayaa kooxdiisa oo ku samayn doonta baadhitaano lagu ogaanayo inta uu le’eg yahay dhaawaca soo gaadhay, halkaas oo ay kasoo bixi doonto muddada uu maqnaanayo.
22 jirkan oo xilli ciyaareedkii hore dhaawac ku seegay 15 ciyaarood ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahannada bandhigga fiican ka samaynayay garoomada xilli ciyaareedkan, isagoo kulan ay guul-darro qarka u saarnaayeenna ku badbaadiyey gool madaxah.
Dhamaan sagaalkii ciyaarood ee ay Barcelona dheeshay xilli-ciyaareedkan illaa hadda ayuu Araujo kasoo muuqday, waxaana uu Koeman ku ducaysanayaa in aanu dhaawaca laacibkani noqon mid halis ah.
Axadda toddobaadka soo socda ayay Barcelona la ciyaari doontaa Valencia, kaddibna waxay Arbacada is haleeli doonaan Dynamo Kiev kulan ka tirsan Champions League halka ay Axadda usbuuca xiga ee ay taariikhdu tahay October 24 ay kulmi doonaan Real Madrid.